Clemson: GPA, Dhibcaha SAT iyo dhibcaha ACT ee loogu talagalay
Jaamacadda Clemson University GPA, SAT iyo ACT Data
Jaamacadda Clemson waxay leedahay doorashooyin la xushay, sannadka 2016-ka dugsiguna wuxuu haystay heerka aqbalaadda 51%. Ardayda la oggol yahay waxay u muuqdaan inay haystaan ​​darajooyinka iyo dhibcaha imtixaanka ee ka sarreeya celceliska. Si aad u aragto sida aad u cabbirto Clemson, waxaad isticmaali kartaa qalabkan bilaashka ah ee Cappex si aad u xisaabiso fursadaha aad ku heli karto.
Dood-wadaagida Heerarka Ogolaanshaha Clemson
Iyadoo qiyaas ahaan kala badh ka mid ah dhammaan codsadayaasha hela waraaqaha diidmada, Jaamacadda Clemson waa jaamacad dadweyne oo xulasho ah. Jaantuska kor ku xusan, dhibcaha buluuga ah iyo kuwa cagaaran waxay u taagan yihiin ardayda qaata. Waxaad arki kartaa in codsadayaasha ugu guulaha badnaa ay heleen "B +" ama celcelis aan ka badnayn , buundooyinka SAT (RW + M) oo ah qiyaas ahaan 1050 ama ka sareeya, iyo dhibcaha ACT oo ka kooban 21 ama ka sareeya. Tirooyinkaasi waa kuwa ugu hooseeya ee kala duwan, waxaadna heli doontaa fursado aad ufiican haddii dhibcahaagu ay sareeyaan.
Ogsoonow in uu jiro midab casaan iyo jaalle ah (ardayda la diidey oo la sugayay) oo la qarsoomay ka dib cagaaran iyo buluug-ardayda qaarkood ee haysta buundooyinka iyo buundooyinka imtixaanka ee bartilmaameedka u ahaa Clemson ma aysan helin. Ogsoonow in ardayda yar la aqbalo imtixaanka dhibcaha iyo dhibcaha ka hooseeya heerka caadiga ah. Tani waa sababta oo ah Clemson waxay tixgelin siineysaa koorasyada koorsooyinka dugsiga sare , ka qaybgalkaaga dheeraadka ah , xaaladdaada dhaxalka , iyo faallooyinkaaga shakhsiyeed (qalab ikhtiyaari ah oo ku saabsan codsiga Clemson). Ardayga leh kaqeybqaadashada dheeraadka ah ee dheeraadka ah iyo koorsooyinka adag ayaa la aqbali karayaa dhibcaha imtixaanka hoose iyo darajooyinka ardayga oo aan ka yareynin koorasyada hore iyo koorsooyinka tacliinta ee dib-u-dhiska.
Sida jaamacadaha xulashada ugu badan, Clemson waxay rabtaa inay aragto inaad dhamaysay manhaj udiyaarin kuliyad ee dugsiga sare. Ugu yaraan, waa inaad qaadatay afar dhibcood oo Ingiriis ah, 3 dhibcood oo xisaab ah, 3 dhibcood oo sayniska shahaadada ah, 3 dhibcood oo luuqad shisheeye ah, 3 dhibcood oo sayniska bulshada ah, hal credit oo farshaxan, iyo laba qof oo kala dooranaya. Codsigaagu wuxuu noqon doonaa mid xoog badan haddii aad si guul leh u dhammeysey AP, IB, Honors, ama koorsooyin kale oo sare.
Jaamacadda Clemson uma baahna wareysi, laakiin dugsigu wuxuu ardayda ugu yeerayaa in ay la kulmaan xubin shaqaale ah. Sameynta wareysi ikhtiyaari ah ayaa leh faa'iidooyin badan - Clemson waxay ku baran doontaa si shakhsi ahaan ah, inaad si fiican u baran kartid dugsiga, iyo go'aankaaga inaad sameysid wareysi ikhtiyaari ah waxay kaa caawineysaa inaad muujisid danahaaga dugsiga.
Clemson waxay leedahay taariikh kama dambeys ah codsiga dambe-Maajo 1-deeda si loogu dhimo-laakiin waxay noqon doontaa faa'iidadaada inaad hore u dalbato. Marka goobaha oo dhan la buuxiyo, gelitaanka waa la xirayaa. Waxaad kordhin doontaa fursadaha aad ku heli karto tixgelin buuxda haddii aad codsato ka hor Diseembar 1aad.
Ugu dambeyntii, xaqiiqso in haddii aad xiiseyneyso muusig ama masraxa masraxa, waxaad u baahan doontaa inaad tijaabisid qayb ka mid ah codsigaaga.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Jaamacadda Clemson, oo ay ku jiraan nambarada boqolkiiba 50 ee SAT iyo ACT, kharashyada, xogta kaalmada maaliyadeed, heerka sare u qaadista, iyo heerka qalin-jabinta, ka hubi jaamicadda jaamacadda Clemson .
Haddii aad jeceshahay Jaamacadda Clemson, Waxa kale oo aad sidan oo kale u eg kartaa dugsiyadan
Clemson waa jaamacad guud oo aad u weyn oo leh jimicsi badan iyo NCAA Division I barnaamijyada ciyaaraha fudud. Codsadayaashu waxay u muuqdaan inay codsadaan noocyada isku midka ah ee dugsiyada sida Auburn University , Jaamacadda Gobolka Florida , Jaamacadda Waqooyi ee Gobolka North Carolina , Jaamacadda South Carolina , iyo Jaamacadda Georgia .
Haddii aad sidoo kale xiiseyneyso jaamacadaha gaarka loo leeyahay, hubi inaad eegtid Jaamacadda Vanderbilt , Jaamacadda Duke , iyo Jaamacadda Wake Forest . Ogsoonow in dugsiyadani ay leeyihiin heerar sareeya oo ka badan kuwa Clemson. Waxa kale oo ay leeyihiin qiimo aad u sarreeya, laakiin codsadayaasha uqalma gargaarka dhaqaale, farqiga qiimaha ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwa aan la dafiri karin (mararka qaarkood, jaamacadaha gaarka ah ayaa xitaa noqon doona kuwo qaali ah maadaama ay haystaan ​​kheyraad badan oo loogu talagalay gargaarka dhaqaale).
Maqaalada Fursadaha Jaamacadda Clemson
Clemson ee xooga badan ee labadaba ee dhinacyada waxbarashada iyo ardayda labadaba waxa ay ka heleen kulliyadaha ugu sareeya ee South Carolina iyo jaamacadaha , kulliyadaha ugu sareeya koonfur-bari iyo jaamacadaha , iyo jaamacadaha ugu fiican . Awoodda jaamacadeed ee sayniska iyo cilmiga sayniska waxay ka heshay cutubka jimicsiga Phi Beta Kappa ee bulshada sharafka leh, iyo dhinaca hore ee ciyaaraha, Clemson Tigers waxay ku tartamayaan ACC, Shirka Atlantic Coast .
UC Merced GPA, SAT, iyo ACT Data
Jaamacada West Chester University GPA, SAT iyo ACT Data
Pitzer College GPA, SAT iyo ACT Data
Jaamacadda Suffolk GPA, SAT iyo ACT Data
Columbia University GPA, SAT, iyo ACT Data
Machadka New York ee Teknolojiyada GPA, Macluumaadka SAT iyo ACT
UNH GPA, SAT iyo ACT Data
Kuleejka GPA ee Muhlenberg, Macluumaadka SAT iyo ACT
Lafayette College GPA, SAT iyo ACT Data
Jaamacada State Appalachian GPA, SAT, iyo ACT Data
Arjiga Guud ee Doorashada Shakhsiyeed Shakhsiyeed 1 (Pre-2013)
Dagaalka Argagixisada kaliya 10 Filimood
Liiska Shaqada by James Fenimore Cooper loogu talagalay Akhristayaasha Voracious
Tiger Woods Online (Goobta Goobta by EA Sports)
Calaamadaha Calaamadaha: Cancer Rising
Baro sida loola jeedo 'Jacayl' ee Mandarin Chinese
On Style Sawir, William Hazlitt
Dib u eegista alaabta: Cooper Zeon RS3-S iyo RS3-A
Toddobo ka mid ah ayaa loo soo bandhigay sawirada Estados Unidos
Saacadaha Ugu Sarreysa ee Sigaar-cabista Sigaarka
Erayada caadiga ah ee isku dhafan: Raadinta iyo Wadajirka
AIDS / HIV + Dhiiga ku jira alaabta la yiraahdo Frooti?
Israel Tour Pictures: Sawirka Wargeyska Dhulka Quduuska ah
Roman Heliopolis & Makhaayaddda Macbadka ee Baalbaq ee Dooxada Beqa ee Lubnaan
Hantidhawrka Qawmiyadaha: Qandaraas-siinta AIDS-ka iyada oo loo marayo Ciriirsanaan
Waqtiga Taariikhda Afrikaanka ah ee Maraykanku: 1920 - 1929
Rinji Gurigaaga Hoosta Cagaarka
Qorista Kaararka Cusub ee New Year's
Xakamaynta Istaandarka Elektronikka (ESC)
10 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Busto Bare
Jaamacadda Waqooyiga Carolina Chapel Hill Photo Tour
ROMANO Magaca Aabeheed